Waa kuma Sunil Chhetri, xiddiga ka goolasha badan Lionel Messi ee ka soo jeeda dal aan laga jeclayn kubadda cagta? – Gool FM
“Bixitaankeygii kooxda Manchester United wuxuu ahaa go’aan sax ah” – Romelu Lukaku
Arsenal oo hoggaamineysa tartanka loogu saxiixa xiddig ka tirsan Atletico Madrid
Benzema oo ogolaaday inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa Real Madrid
Real Madrid mise Barcelona, waa tee kooxda la xiriirtay Christian Eriksen?
Kulanka kaliya uu cabsi dareemay, sirta ka dambeysa guulaha Zidane & Dani Carvajal oo dhowr arrimood ka hadlay
Horudhac: Heegan Sports Club Iyo Mogdisho City Club… (Wax walba ee aad uga baahan tahay kulanka adag ee Galabta)
Rivaldo oo si toos ah u magacaabay badelka saxda ah Luis Suarez ee kooxda Barcelona
Waa kuma Sunil Chhetri, xiddiga ka goolasha badan Lionel Messi ee ka soo jeeda dal aan laga jeclayn kubadda cagta?
Haaruun August 8, 2019
(Yurub) 08 Agoosto 2019. Kubadda cagta Caalamka ayaa marti gelisay xiddigo badan oo cajiib ah sida Ronaldo Dalima, Zidane, Ronaldiho, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr iyo kuwo kale oo inaga yeelay inaan xiiseynayo daawashada kubadda cagta, balse intaasi kuma eka xiddigaha mucjisada leh ee kubadda cagta ciyaara.
Isagu waa xiddig ka soo jeeda waddan aan laga jeclayn kubadda cagta, balse waa laacib muujiyey karti iyo dadaal badan, waxa uu hannaan ciyaareed kala mid yahay CR7, waana marka aan ka eegno dhanka dadaalka iyo dhalinta goolasha.
Waxa uu dhalinta goolasha heerka qaran ka badan yahay Lionel Messi, Neymar Jr iyo xiddigo kale, waana ninka reer India ee Sunil Chhetri.
Warbintan waxa aan ku eegeynaa xogo iyo xaqiijooyin ku saabsan ciyaaryahan Sunil Chhetri, sababta uu u neceb yahay cunnooyinka sonkorta leh iyo sirta ka dambeysa hadalladii qiirada lahaa ee uu u jeediyey muwaadiniinta reer India, markii uu ku guubaabinayey kubadda cagta.
Nimco C/llaahi Magan ayaa warbixintan soo jeedinaya ee ka daawo muuqaalka hoose:-
SAWIRRO: Kooxda Arsenal oo soo bandhigtay daafaceeda cusub ee David Luiz… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa?)
RASMI: Alex Iwobi oo ka tagay kooxda Arsenal